Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 24/03/2020)
Brisbane na imali Queensland kwaye ubusiswa A-Uluhlu ezinika ezifana Sea World, i iiloni omhle gadi South Bank, kunye Ibali Bridge nezininzi - Australia elide cantilever ibhulorho.
Kwakhona isixeko creative, nge art olondolozo lwembali zivaliweyo, neegalari ezo yaye cafes Chic ezininzi, plus oko sokufezekisa ephelele esimhlophe Gold Coast, ulwandle, ne surf.
at 21 ubude, kuya ukukhonza 18 izitishi kuso sonke isixeko kunye abahlali yaye abakhenkethi ngokufanayo kukwazi ukuba akhwele nangaphandle njengoko ethanda.
Ipswich imi kumzantsi-ntshona kummandla ombhaxa Brisbane kwaye apho uya kufumana emangalisayo zocweyo Rail Museum.
Brisbane moya sixakeke yezothutho exakekileyo nto kokuhlolela cafes ezifana Fonzie Abbot, imivalo ezifana Transit Tavern kunye Ababoneleli yokupaka efana Looking4.com.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye itekisi kunye sinike nje ngetyala nesihlanganisi kule post blog, okanye cofa apha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/tips-brisbane-train/ - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)